(trg)="2.3"> သူတို့ထံသို့ပို့ကြလိမ့် မည်။
(trg)="7.4"> ငြင်းခုန်ပြောဆိုကြပါ ၊
(trg)="1.1"> မလေးရှား နိုင်ငံရေးသမားများ ပြောသည့် လန့် စရာစကား ( ၈ ) ခွန်း
(trg)="2.1"> ထိုဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ကောက်နုတ်ချက်အများစုသည်အင်တာနက်ပေါ်နေထိုင်ကြသူများက ပေးပို့ထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။
(trg)="3.1"> ဘာလစ်( ခ်) စိနသည်မလေးရှားတွင်မကောင်းသတင်းဖြင့် ကျော်ကြားသည့် ကောက်နုတ်ချက်စကားတစ်ခု ဖြစ်သည်။
(trg)="3.2"> ထိုဝက်( ဘ်) ဆိုက်အား ဘာလစ်( ခ်) စိနဟု အမည်ပေးရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ ၊
(trg)="4.1"> ဘာလစ်( ခ်) စိနဆိုသည့် မလေးဘာသာစကားအား တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လျှင်" တရုတ်ပြည်သို့ပြန်သွား " ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
(trg)="4.2"> ဘာလစ်( ခ်) စိနဟူသည့် အသုံးအနှုန်းမှာ ၂၀၁၃ခုနှစ်ဇူလိုင်လက ရှတ်အလမ်အထက်တန်းကျောင်းရှိ ကျောင်းအုပ်က စတင်သုံးစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(trg)="4.4"> မလေးရှားနိုင်ငံရေးသမားများက ၄င်းအသုံးအနှုန်းကို မပျောက်ပျက်သွားရစေရန်ပြောဆိုသုံးနှုန်းနေကြရာမှတစ်ဆင့် အကြံရပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံရေးလွင်ပြင်ရှိ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်BalikCina .
(trg)="4.5"> comကို ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(trg)="4.8"> မလေးရှားနိုင်ငံရေးသမားတွေက ကြောင်တောင်တောင်စကားတွေကို ပြောလွန်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာ လိုက်မီဖို့တောင်အခက်အခဲဖြစ်လာရတယ်။
(trg)="4.9"> စကားတစ်ခွန်းထွက်လာလိုက်လို့ရယ်လို့တောင်မပြီးသေးဘူး နောက်တစ်မျိုးက အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပျံ့နေပြီ ။
(trg)="4.10"> အဲလိုတွေဖြစ်လွန်းတော့ကျွန်တော်တို့ရယ်ခဲ့ရတာတွေရဲ့တစ်ဝက်လောက်ကိုတောင်ကောင်းကောင်း မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူး ။
(trg)="7.3"> သို့သော ၄င်း ၏ အတွေးထဲတွင်တွစ်တာဌာနချုပ်သို့ရောက်နေခဲ့သည်ဟု ထင်ခဲ့ပုံရသည်။
(trg)="13.2"> အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်အန်ဝါ အီဘရာဟင်က တည်ဆဲအစိုးရ ၏ အားကိုးရမှုအား ပိုမို့နှိမ့် ချရန်MH370 အဖြစ်ဆိုးအား အသုံးပြု ၍ ရနိုင်မည်ဟု ထင်ခဲ့ပုံရသည်။
(trg)="13.3"> သူသာ ပြန်အပြစ်တင်ခံခဲ့ရသည်။
(trg)="15.3"> ထိုဆွေမျိုးဖြစ်သူတို့ဒေါသထွက်ရခြင်းမှာ မတည်းဖြတ်ထားသော မီဒီယာအချက်အလက်များကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့သည်။
(trg)="1.1"> နည်းပညာက လူတွေအား ကမ္ဘာ့ဘာသာစကားများကို လေ့လာနိုင်ရန်သာမက မကွယ်ပျောက်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်မည်သို့ကူညီနေ သလဲဆိုတာ
(trg)="2.1"> ဤဆောင်းပါးကို အွန်တာရီယို တက္ကသိုလ်နည်းပညာ ကျောင်းမှ လူမှုဘာသာဗေဒ ပညာရှင်အလီဆင်အေးမား ( Allyson Eamer ) က ဧည့် သည်အဖြစ်ရေးသားသည်။
(trg)="2.2"> ဤဆောင်းပါးကို မူလပထမက Ethnos Project blog တွင်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။
(trg)="3.2"> သူတို့ပျောက်ကွယ်ခြင်းမှ ကယ်တင်ရန်အလို့ငှါ ကျိုးပမ်းရာတွင်ဘာသာစကား ပြောဆိုသူများ ၊
(trg)="5.1"> အံအားသင့် စရာတစ်ခုမှာ အချို့ပညာပါရမီရှင်တို့သည်“ Linguistic Darwinism ” ဟုခေါ်နိုင်သော အကြံ့ခိုင်ဆုံး ဘာသာစကားသည်သာ ရှင်သန်နိုင်သည်ဟူသော အယူအဆကို တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိပါ ။
(trg)="6.8"> စီးပွားရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသတို့သည်ဘာသာစကားနဲ့ခွဲခြား ၍ မရအောင်ဒွန်တွဲနေပုံတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အထူး အကြယ်တဝင့် ထောက်ပြရန်လိုမည်မထင်။
(trg)="8.2"> ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ဘာသာစကားများ ၏ စကားသံကို အသံသွင်းခြင်းအားဖြင့် နည်းပညာသည်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
(trg)="8.6"> apps များပြုလုပ်၍ သော၄င်း လွတ်လပ်သော သင်ယူမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။
(trg)="9.1"> အတွေးအခေါ်ရှေ့ပြေးသူများသည်နည်းပညာ ၏ မကြုံစဖူးသော တန်ခိုးကို အသုံးချကာ ပျောက်ကွယ်လှနီးပါးဖြစ်နေသော ဘာသာစကားများကို ပြန်လည်ကယ်ဆယ်နေကာ အချို့အခြေအနေများတွင်ပျောက်ဆုံးသွားသော ဘာသာစကားများကို အသက်ပြန်သွင်းနေကြသည်။
(trg)="11.2"> ဂါးလက်( Gaelic ) ဘလော့ဂါများ သည်အိုင်ယာလန်ဘာသာစကား ၏ အသုံးပြုမှုအပေါ်အကြံပေးချက်များ ဝေမျှနေ ကြသည်။
(trg)="12.1"> မြောက်အမေရိက အမေရိကန်အနောက်တောင်ပိုင်းတွင်ပြောသော နာဗာဂျို ( Navajo ) စကားအတွက်ကိုယ်တိုင်လေ့လာနိုင်သော သင်ခန်းစာ စီဒီများ အဖြစ်သို့ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။
(trg)="12.2"> ကနေဒါနိုင်ငံ မာနိတိုဘာ ဒေသ ၏ အိုဂျီဘွေး ( Ojibwe ) စကားပြောသူတို့သည်အိုင်ဖုန်း app ကို အသုံးပြုကာ သူတို့၏ စကားကို ပြန်လည်အသက်သွင်းနေကြသည်။
(trg)="13.1"> အာဖရိက ကင်ညာတွင်စကားပြော ဘာသာများအတွက်ကွန်ပျူတာ အချက်အလက်များအဖြစ်သို့ရေးသားဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။
(trg)="13.2"> ရှေးဟောင်း ပုံပြင်များကို မာလီ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများနှင့် အသံသွင်း သိမ်းစည်းနေကြသည်။
(trg)="14.2"> အယ်လ်ဆာဗေးဒေါနိုင်ငံ ၏ ပီပေး ( Pipil ) ဘာသာစကားအတွက်စကားပြော အဘိဓါန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
(trg)="14.3"> ပါရာဂွေးနိုင်ငံ ၌ လည်း အချေး ( Aché ) ဘာသာစကားတွင်လူကိုယ်တိုင်ပြော ဇာတ်လမ်းများကို အသံသွင်းခြင်း ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။
(trg)="16.1"> အာတိတ်အာတိတ်၏ ဘာသာစကားများထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော အင်နု ( ခ်) တီတွတ်( Inuktitut ) စကားအတွက်အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများ ရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
(trg)="18.2"> ပစိဖိတ်ကျွန်း ဘာသာစကားများ အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံပြင်ပြောခြင်း အစီအစဉ်များ အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
(trg)="3.1"> ဝင်ငွေ အလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံများတွင်သေဆုံးမှု ၏ အဓိက အကြောင်းရင်းသည်ဘာပါလဲ ။
(trg)="5.2"> ငှက်ဖျားရောဂါ နှင့် HIV / AIDS
(trg)="8.1"> ၄င်း စာရင်း အရေအတွက်ကို နောက်တစ်မျိုး စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့် မည်ဆိုပါက ထို ၈ .
(trg)="8.3"> နောက်တစ်မျိုး ပြောရသည်ဆိုသော်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ပြသနာသည်ချမ်းသားသော နိုင်ငံများ ၏ ပြဿနာမဟုတ်၊
(trg)="10.4"> ၇ သန်းသည်အိမ်တွင်းလေထုထဲရှိ မီးဖိုချက်ပြုတ်ရာ ကဲ့သို့သော နေရာများမှ ထွက်လာသော အမှုန်အမွား ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် သေဆုံးကြသည်။
(trg)="11.2"> ၅ သန်းသည်HIV / AIDS ရောဂါ နှင့် သော်လည်းကောင်း ၉၃၀၀၀၀ သည်အဆုတ်နာ တီဗီရောဂါကြောင့် သော်လည်းကောင်း သေဆုံးခဲ့သည်။
(trg)="14.5"> အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ သို့မဟုတ်ဝမ်းရောဂါတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
(trg)="14.7"> အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါများ ၏ ပုံမှန်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို တိုးမြှင့် ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
(trg)="15.2"> သို့ပေလည်း ဤလို အဖြစ်မျိုးကို မြင်ယောင်ကြည့် ပါ ။
(trg)="16.4"> သူက တစ်ပတ်နှင့် တစ်ပတ်ပိုပိန်လာပြီး ပိုပင်ပန်း လာသည်။
(trg)="19.8"> ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြား နွမ်းပါးသော ဒေသများကဲ့သို့ပင်သင်သည်လည်း အစဥ်တစိုက်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထဲတွင်အသုံးချခံနေသူလို ဖြစ်နေသည်။
(trg)="19.1"> သင်သည်အဆိပ်သင့် နေသော ဆင်းရဲသူများအထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ကာ သင့် ၏ အသံကို ထုတ်ဖော်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိ ၊
(trg)="19.6"> ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားရ မှာလဲ ။
(trg)="20.1"> ကျွန်တော်တို့ဤပြဿနာကို မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ ။
(trg)="21.3"> ရွှေတူးဖော်ခြင်း နှင့် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံများမှ ထွက်လာသော ပြဒါးများကို ကျွန်ုပ်တို့စားသုံးသော ငါးများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပြီး အာဆင်းနစ်( အဆိပ်စိန်) ကို ဆန်ထဲ ၌ တွေ့ရှိနေရသည်။
(trg)="23.3"> ဤအချက်၏ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ အကြောင်းအရင်းကတော့အသိသတိနှိုးကြားမှု နည်းပါးတာ ဖြစ်နိုင်သလို ဤရှုပ်ထွေးသော ပြဿနာအစုံလိုက်ကို မည်သို့စတင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ကို မသိခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
(trg)="26.6"> အဘယ့် ကြောင့် ဆိုသော်SDGs လာမည့် နှစ်များတွင်နိုင်ငံတကာနှင့် နိုင်ငံတော်အလိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို သတ်မှတ်သွားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။